:: My Little World ::: တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ဝရစေသား
Posted by Nay Nay Naing at 6/18/2007 10:53:00 AM
မမေလဲ အဲဒီသီချင်းလိုချင်နေလို့ နေနေ သီချင်းရှာလို့ရသွားပြီဆိုကတည်းက ဘလော့ဂ်မှာ တင်မယ့်နေ့ကို စောင့်နေတာ :D
Monday, June 18, 2007 1:46:00 PM
အမရဲ့ ဘန်နာလေးကို ကြိုက်တဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်နော်..
Monday, June 18, 2007 1:51:00 PM
Hey ma thanks for the songs. I never listen haymar n yadanar oo's solo before. Only got haymar+memekhal version.
Now I get to listen all versions thanks to you.
ဒီနေရာမှာ အကြိုက်တူတယ်ပေါ့။ အရင်က နေးတစ် DJ တွေစီမှာ ပဲ သီချင်းတောင်းလိုက်ရင် ကောင်းမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်ဆိုပြီး တင်လိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့ . စဉ်းစားမိသေးတယ် :D. DJ တွေမှာ ဒီသီချင်းမရှိလောက်ဖူးထင်လို့အားနာတာနဲ့မတောင်းတော့ပဲ ဟေမာဆိုထားတဲ့ ဗားရှင်းကိုပဲ မရ ရအောင် ရှာလိုက်ပါတော့တယ်.. :D ခုမှစဉ်းစားမိတယ်.. DJ တွေကို သီချင်းမရှိ DJ တစ်ယောက်ယောက် ကိုယ်တိုင်ဆိုပြီး တင်ပေးပါလို့ပြောလို့ ရတာပဲ.. နောက်မှ အဲ့ဒီလို တောင်းတော့မယ်
လာပြီး ကွန့် မန့် ထားသွားတာ ကျေးဇူးပါ။ အဲ့ဒီ ဘလောခ့်ကို ၀င်ဝင်ခြင်း ဘန်နာကို အရင် သတိထားမိလိုက်ပြီး ကြိုက်သွားလို့ရေးထားဖြစ်ခဲ့တာ.. :)
အစက ညီမ ဆီမှာများ ဟေမာနေ၀င်း တစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့ ဗားရှင်းရှိမလားလို့တောင်းဦးမလို့ ပဲ.. နောက်တော့ ညီမတို့ ဆိုထားတဲ့ သီချင်းကို အသေအချာနားထောင်ကြည့်တော့ ဟေမာနဲ့မီးမီးခဲဆိုထားတဲ့ ပုံစံမှန်းသိလိုက်လို့ကိုယ့်ဟာကို လိုက်ရှာလိုက်တော့တာ.. ကျေးဇူးပဲညီမရေ.. ညီမတို့ ဆိုထားတဲ့ဟာ နားထောင်ပြီးမှ ဒီသီချင်းကို သတိပြန်ရသွားတာပါ..
Tuesday, June 19, 2007 1:43:00 PM